Bianca feminized mbeu | MyWeedSeeds.com
Type: kazhinji indica
Mhedzisiro: akasimba kwazvo akatakwa nematombo
Bianca mbanje inoguma nekuyambuka matatu akatanhamara marudzi kuti ubudise inonakidza nyowani chirimwa. Mageneti ake anosanganisira White Chirikadzi, anokunda mamwe maCannabis Makapu kupfuura chero mamwe maruva uye anowanzoonekwa seimwe yemhando dzakanakisa dzenyika dzekannabis. Iye zvakare anosanganisira Afghan genetics, iyo inopa ruzivo-rwekurarama mazana emakore emamiriro ezvinhu makomo akaomarara - kumuita akasimba uye akasiyana-siyana mune chero nharaunda irikukura. Muchinjikwa wechitatu unounza White Queen (mambokadzi wechena cannabis) iyo inounza mabhureki akapfuma muTC uye resin zvekuti vanopenya semadhaimani uye utsi hwakaomesesa. Iko kusanganisa kunoguma kwehunhu hwakanaka kunogadzira chirimwa chembanje icho chinokurumidza kukosheswa nevarimi kutenderera pasirese uye neAmsterdam kofi shopu connoisseurs.
Kutenda kune yake Afghan genetics, Bianca chirimwa chakaomarara chinokura chero kupi. Unogona kumukurira mukati kana kunze, zvichienderana nenzvimbo yako iripo. Kunyangwe kunze anosvika chete pakureba kwepakati aine hunhu hwakafanana negwenzi reBonsai. Iwe uchafadzwa nekukasira kwaakagadzirira kukohwa, kutenderera vhiki nomwe. Izvi zvinoreva kukohwa kwaGunyana kana Gumiguru kwezvirimwa zvekunze, zvinoenderana nedunhu rako nemamiriro ekunze mwaka iwoyo. Chirikadzi Chirikadzi uye White Queen vanoratidza pesvedzero yavo muBianca inopenya, yakatetepa yeTC makristasi uye resin. Iye ane echinyakare chena icing chitarisiko iwe chaungatarisira kubva kune vake Vachena mubereki. Hukuru hwake uye hwakapfuma-hupfumi buds zvinoreva kuti kunyangwe iye aine hushoma hurefu, anogadzira huremu-gohwo iwe raungatarisira kubva kune wakareba murefu.
Bianca buds inokubata iwe kune yakaoma kunzwisisa uye inogutsa flavour musanganiswa. Iwe unozotanga kuona inonakidza yemaruva theme, uyezve isinganzwisisike zano rehashish. Kunhuwirira kwake kune hunhu hwakawanda uye simba. Mhando mitatu yaBianca inopa dzakasiyana yega yega inopa akasiyana akasiyana kune yake yepamusoro. Iyo yakasimba kwazvo uye yakanaka kumusoro. Iwe unonzwa uchizorodzwa nekusimudzirwa uye unakirwe naye akasimba mushure mekurohwa. Iwe hausi kuzowana hutsi huri nani.
Bianca nguva dzose mbeu
Chiedza chekuchamhembe mbeu
Super Nova | Mbeu dzisingaperi
Aussie Blues mhodzi
TropiCanna mbeu yembanje
Chibereko Chisingabvumirwe Chikadzi
More info Vakadzi